Masuul ka tirsan Hay’ada Inxa oo Caawa lagu dilay Gaalkacyo. – SBC
Masuul ka tirsan Hay’ada Inxa oo Caawa lagu dilay Gaalkacyo.
Allaha u naxaristee Cabdi Farax oo ka mid ahaa Masuuliyiinta Hay,adda INXA oo ka shaqaysa xuququul insaanka ayaa goor dhawayd lagu dilay magalada Galkacayo, kadib markii koox hubaysan oo aan la garanayn ay rasaas ku Fureen.
Dad goob joogayaal ah kana gaabsaday soo gudbinta iyo xigashada magacyadooda sababo jir amniga lana hadlayay SBC International ayaa noo sheegay in xiligi ladilay Allaha unaxariistee Marxuumka uu kasoo baxay masjid kamid ah masaajidada kuyaala Gaalkacyo.
Wararka ayaa ingtaas ku daraya in ay baxsadeen kooxdii falka dilka ah gaystay lamana garanyo sababta keentay dilka marxuumkan.
Allaha Unaxariistee Marxuum Cabdi Farax oo INXA u qaabilsanaa Puntland ayaa sidoo kele ka mid ahaa guddi dhawaan loo soo xulay in uu qayb ka noqdo 9 xubnood ee loo xilsaaray kormeerida doorashooyinka Puntland.